Menyu yezviri mukati. Ndeipi mamiriro ezvinyorwa uye ndeyei | Gadget nhau
Context menyu muenzaniso
Nhasi tichaona ndezvipi zvirimo mamiriro uye ndezvei. Tichaona zvakare kuti menyu yemamiriro ekuchinja inoshanduka sei zvichienderana nenzvimbo yekorashira pachiratidziri uye nekushinga uye neruzivo ini ndichapa ruzivo rwekuti ungashandure sei mamiriro emenyu nekuwedzera kana kubvisa zvinhu mairi. Zvakanaka ngatitangei netsananguro ye "mamiriro menyu".
1 Ndeipi mamiriro ezvinyorwa?
2 Ndeipi mamiriro ezvinyorwa zve?
3 Windows XP desktop yemenu menyu
4 Context menyu yefaira
Ndeipi mamiriro ezvinyorwa?
Menyu yezviri mukati uyezwindo rinovhura kana isu tinya-kurudyi mbeva. Iyi menyu chinhu chinorarama cheiyo sisitimu yekushandira sezvo ichigadziriswa nekuwedzera zvinhu zvitsva kumenu yemamiriro ezvinhu patinoisa mapurogiramu matsva.
Dzimwe nzira dzekubvisa maapplication eWindows
Haasi ese mapurogiramu atinoisa anowedzera zvinhu kune iyo menyu yemamiriro uye zvaizofanirwa kutaurwa kuti nerombo rakanaka, nekuti kana zvisina kudaro menyu iyi inogona kukura nenzira yekuwedzeredza, ichitadzisa basa rayo guru. Ndeipi iri basa hombe remenu yemamiriro?, ramba uchiverenga:
Ndeipi mamiriro ezvinyorwa zve?
Iyo yemukati menyu inoshandira kufambisa basa redu rezuva nezuva nekombuta yedu. Kana isu tavhura iyo mamiriro ezvinyorwa nekudzvanya nekona kurudyi mbeva bhatani (iyo yekuruboshwe kana iwe uine iyo yakagadzirirwa masara) isu tinowana hwindo mune izvo zvakawanda sarudzo senge sekugadzira dhairekodha kana kunanga kuwana, kumanikidza faira, kutamba yako mp3s, kuongorora faira ine antivirus, nezvimwe, uye isu tinogona kuita zvese izvi zvakananga uye pasina kuvhura chirongwa chakabatanidzwa mune yakasarudzwa chiito pamberi.
Sezvandambotaura kare, zvinoenderana nenzvimbo yescreen yako yaunovhura menyu yemamiriro, inozopa chimwe chinhu kana chimwe chakasiyana muzvinhu izvo zvinoratidzira kana zvirimo mune yayo menyu. Ngatitarisei mimwe mienzaniso.
Windows XP desktop yemenu menyu
Kana isu tikabaya nebhatani repakona pane imwe nzvimbo yemahara yedesktop yako tinowana anotevera mamiriro emenyu:
Mariri iwe uchaona zvese zvaunogona kuita nezvinhu zviri pane desktop yako, sekuronga iyo icons. Kana isu tikaisa iyo inotora pamusoro pechero chinhu chemenu chine museve parutivi, imwe yekudonhedza menyu ichaonekwa sezvaungaona mumufananidzo uri pamusoro.
Kunyangwe isu tiri kutaura pamusoro pemenu yemamiriro eWindows XP, izvi zvakafananawo neWindows 7 neWindows 10. Kunyangwe ichokwadi kuti iyo system yakagadziridzwa pamusoro pemakore ese aya, menyu yemamiriro ezvinhu ichiripo uye iine kushanda kwakafanana mune ese shanduro.
Maitiro ekuisa vhidhiyo se Wallpaper muWindows 7
Context menyu yefaira
Kana isu tikabaya pane iyo faira mamiriro ezvinhu menyu anozosiyana zvichienderana neiyo kuwedzera iyo ine iyo faira (mafomati ayo). Semuenzaniso, iyi ndiyo mamiriro ezvinyorwa zvefaira pamwe nekuwedzera PDF.
Mune ino menyu tinoona zvinhu zvisina kuoneka mu menyu yemamiriro kubva paWindows desktop, senge "Scan ..." sarudzo yekutarisa neantivirus kuti iyo faira rePDF harina hutachiona kana zvimwe zvinotyisidzira zvinozivikanwa. Isu tinogona zvakare kuona iyo "IZArc" chinhu icho chinovhura yechipiri menyu iyo yatinogona nayo compress iyo PDF faira uchishandisa iyo compressor IZArc.
Asi sezvandakambotaura, iyi menyu inozosiyana zvichienderana nerudzi rwefaira ratinoidaidza. Semuenzaniso, kana isu tikazarura menyu yezvinyorwa nekudzvanya kurudyi pane .DOC faira (Shoko faira) pane pane iyo .PDF faira, tinowana inotevera mamiriro menyu.
Sezvauri kuona, menyu iyi yakanyanya kuwanda kupfuura iyo yapfuura uye zvakare inosanganisira iyo yekudhinda sarudzo iyo imwe yemamiriro ezvinhu isina kuunza.
Tinogona kuwana akawanda akasiyana mamenyuIsu tatoona zvimwe asi misiyano haina magumo, mune angangoita ese mapurogiramu isu tichawana mameseji emamiriro ezvinhu kutibatsira kuita mabasa nekukurumidza pasina kufambisa kuburikidza nemabharaki echirongwa chega chega. Saka isu tiri kungoona iyo mienzaniso yakaratidzwa kare.
Ini ndaida kutsanangura nhasi kuti ndezvipi mamenu emamiriro uye izvo zvaari nekuti nenzira iyoyo mune ramangwana dzidziso ndonongedzera kwavari uye kana mumwe munhu asingazive mameseji emamirire acho, ivo vanongofanira kumira pano kuti vawane pfungwa.
Kune avo vanoda kuziva zvakawanda pamusoro pemamenu ezvinyorwa, ini ndinokuudza kuti zvinokwanisika kuzvinyorera nekuwedzera kana kubvisa zvinhu kubva pazviri. Nepo kumwe kwekuita uku kuchigona kuitwa zviri nyore, kumwe kwakanyanya kuomarara uye kusingagumi kwechinyorwa chino. Rimwe zuva tichaona maitiro ekuita zvimwe zvirinyore nadzurudzo mumenu yemamiriro. Parizvino uye kune avo vanoda kuve izere kutonga pamusoro pemamiriro ezvinhu, ndinokurudzira kuti uverenge ichi chinyorwa nezve mamiriro ezvinyorwa, asi neYambiro yakajeka, chinyorwa hachikurudzirwe vashanduri uye vasina ruzivo vashandisi sezvo iwe uchifanira kushandisa iro registry reWindows kushandura mamiriro ezvinyorwa. Kune rimwe divi, ini ndinokurudzira kuti munhu wese ane ruzivo rwakawanda atarise zvese icho chinyorwa uye peji re Erwind akasvetuka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Software » Contextual menyu
inoita 15 makore
Mhoroi ndinongoda kutaura kuti peji rino rakanyatsogadzirwa uye ndinovimba vanoramba vachiita kuti mapeji ave nyore kunzwisisa uye kuti vanotitsanangura sezvamunoita, makorokoto uye ndinokutendai nekuisa nguva yenyu mukuvaka mapeji kuitira kuti isu vashandisi Iva neakanakisisa uyu super baba
Pindura kuna dianita
Muurayi Vhiniga akadaro
Ndiri kufara kuti unofarira peji, ndinokutumira kukwazisa kwakashata kwemashoko ako emutsa.
Pindura Muurayi Vhiniga
iwe unofanirwa kuve nezvikamu zvemenu yemamiriro
heyy ndatenda neruzivo 😉 yakandipa iro basa ... kwaziso 🙂
Pindura kuna lucy
hei ndinotenda neruzivo rwakandishandira iro basa ... kwaziso
Pindura kuna faby
hesi tete ndibatsireiwo nebasa rangu rechikoro… nyasha
Pindura kune luchiaca
Mhoroi, ndinonyatsofunga kuti blog yako yakanaka.
Asi ini ndine dambudziko nemamiriro ezvinhu ePC yangu uye ndinoda kukuudza nezvazvo kuti uone kana uchikwanisa kundibatsira. Zvinoitika kuti kana iwe ukavhura MiPC uye kurudyi-tinya pane chero dhisiki dhiraivhu, ingave iri rakaomarara diski, usb kana cd drive, komputa haina kupindura uye haina kuvhura mamiriro ezvinyorwa. Asi zviri muMyPC chete, nekuti mumafolda kana iwe ukavhura menyu yemamiriro. Unogona kundibatsira ndapota ???? Ini handizive zvekuita kana nzira yekutsvaga rubatsiro padambudziko iri.
chiwanikwa !! akadaro
ndinokutendai zvikuru nerubatsiro urwu
iwe unofanirwa izvo zvakandibatsira zvakanyanya
yekombuta yangu yebasa rechikoro
uye parutivi zviri nyore kwazvo nekuti unogona kuteedzera
na: gem :);)
Pindura kune gem !!
@Pao angangodaro manejimendi manejimendi ane sarudzo iyoyo yakaremara. Kana iwe uri wega unoshandisa komputa, unogona kunge uine hutachiona.
Mhoro: ndanyatsofarira peji rako. Ndakasvika pairi nekuti ndine dambudziko nemenu yemamiriro; ona kana uchikwanisa kundibatsira:
Ini ndinorekodha mafaera ezwi nemakrofoni. Ini ndingade izvo, kana ini ndichizogadzira imwe, kuti ndikwanise kuigadzira kuburikidza nefaira yemukati menyu, tinya pa «Nyowani», uye kuti, ipapo, sekuwana kwandinoita faira reIzwi Nyowani, kana nyowani nyowani yePowerPoint , Ndinowana sarudzo yezwi faira faira, kana wav, kuti ndipe zita, uyezve, kuti ndikwanise kurivhura zvakananga kubva kuchirongwa chekurekodha, ndisinga chengetedze uye ndoripa zita ipapo.
Izvo zvinogoneka, nekuti kubasa kunoshanda (ndiwo mahwindo 2000), asi kumba, haina (ini ndine Vista). Ndinokutendai nepeji renyu, uye ndinovimba kuti, pamusoro pangu, mubvunzo nemhinduro zvinogona kunge zviri zvekufarira.
Zvakanaka, ini handina zano rekuita zvaunoda Damian. Ini ndinokurudzira kuita tsvagiridzo dzeGoogle dzakadai se "wedzera nzira pfupi kumenu yemamiriro" kana "mapfupiso ekuona menyu menyu" kuti uone kana iwe uine rombo rakanaka.
VANOTENDA NEI Ruzivo RWAKANDIBATSIRA ZVAKAWANDA MUMBA MUMBA
Pindura kuna jefferson
Nyasha akandishandira zvakanyanya uye ramba uchienda
eta yekukamba hahahaha ndatenda neruzivo
Ini handina kushandisa iyi inf asi zvakadaro tankyou
Pindura kune alexa
Kana komputa ichishandiswa nevanhu vazhinji, account yako inogona kushomeka uye hauna mvumo yekuvhura menyu yezvinyorwa muzvikamu. Kana iri yako komputa yako, inogona kunge iri hutachiona kana malware. Darika antivirus uye antispyware.
Pindura kuti dey
Zvakanaka, chokwadi ndechekuti ini ndaiziva icho icho pachacho, kana ndikachinyatso-kudzvanya uye mashandisiro ayo nezvimwe zvakadaro, ndaisaziva kuti yainzi chii, yainzwika sechinhu kwandiri, asi ini ndaisaziva chii.
Ndatenda chaizvo chaizvo!
Zvakanaka, hazvina kundibatsira asi zvakanakisa…. kune vamwe = (^ ^) =
Hazvireve kuti ini ndaive BAa vuzcanDDop asi weno… <3 !! = (* _ 0) =
Kana izvi zvichibatsira mademo, hapana dambudziko !! zvakadaro, ndatenda
Mazvita, vakandibatsira nezvandaida chete. Sara mushe;)
Mhoroi, ndine dambudziko uye nderekuti pandinodzvanya panzira yekudimbudzira yandinayo pa desktop kudiski rekunze, harivhurike nemamwe ma diski uye rinowoneka pachiratidziro, «Kuisa nekugadzirisa zvinhu zvehurongwa , shandisa control panel. control »Ndakaedza asi handina kukwanisa kuzviita. Kutenda mberi.
Pindura kune ortupan
Mhoro zvakange zvisina basa kwandiri
Yakandipa zvakawanda zvakakosha, ndatenda, zvichengetedze
email yangu iri jhoncena_12_6@hotmail.com ndiwedzere 8 ======= D
Mhoro mamacitas vasikana
Wakanakisa mupiro, makorokoto, ramba wakadaro.
Ndine dambudziko, pandinodzvanya pafolda imwe fafitera rekutsvaga rinowoneka, kuti ungachinja sei sarudzo kuti uvhure pane kutsvaga kubva mumenu yemamiriro? Kana kuti ungagadzira sei zviito kuti iyo folda ivhure? Ndatenda
iyi chid0o mgraxis yakandishandira
Mhoroi, ini ndoda kuti undibatsire ndapota, ini ndoda matanho ekugadzirisa ndima uchishandisa iyo yekufungidzira menyu .. Ndinovimba unogona kundibatsira !!
Zvakandibatsira zvakanyanya ... ndakafunga kuti ndakanga ndisisachawane ruzivo rwandaida ... kudzamara ndawana peji rino ... ndatenda
Pindura kuna maiia
peji rino rakakura ndatenda
Iwe (s) une (n) husiku hwakanaka
gadza inotevera regsvr32 C raibhurari: windowssystem32crviewer.dll pane windows 7
paunenge uchichiita, inondiudza inotevera kodhi yekodhi 0x80020009
Unogona kundibatsira kuzvigadzirisa?
Ndatenda pamberi pekutarisa kwako.
hello grax yeruzivo chiuru ndatenda
laura cecilia cruz de la cruz akadaro
Ndatenda, zvakandibatsira kuti ndione kuti mameseji emamiriro ezvinhu anogadzirwa sei uye inyasha dzipi dzinotibatsira.
Pindura kuna laura cecilia cruz dela cruz
EIFFEL JEFELSON akadaro
Kutenda neruzivo rwakakosha kwandiri, maita basa kwazvo
Pindura kuna EIFFEL JEFELSON
Mhoro menyu yemamiriro muinternet muongorori haishande kwandiri chii chandingaite. yakanga iri mushure mekutsvaga internet 8. Vakaisa plugin inonzi accelerator uye kuti ini ndinofunga ndizvo zvave kuremara kurudyi mbeva bhatani asi chete painternet. Ndatenda
haitauri chero chinhu chinonakidza
Kwazisai vanhu veiyo system yepakati yeBarranquilla
JAZMIN MENDEZ INCLAN akadaro
MHOROI CHIDA UYU PAGA PAMUSORO PESE ZVESE LÑA PHRASE JEJEJEJEJ
Pindura kuna JAZMIN MENDEZ INCLAN
Ndatenda zvikuru, zvinonakidza uye zvakandibatsira zvakanyanya
zvinonakidza uye zvinonzwisisika, ndinokutendai zvikuru
Ndatenda kwazvo zvakandibatsira zvakanyanya pabasa rangu rekutsvaga
Pindura kuna nikol
Ndiani gehena ndibatsire ini nezve chii chiri pfungwa screen
ndatenda mhondi vhiniga bye
chido guey akandishandira kurangarira rudo nerunyararo kwaziso kumakamera angu epasi rese
zvakare uti mhoroi kuna sakura muudze kuti ndinobva kumex kwaziso kune vese vakadzi vakuru tsvarakadenga mushandi werudo anoti fambai
luci uye savi akadaro
ps iyi info yakashanda isu
yebasa redu rekudzidzisa
Ndatenda zvikuru uye tinovimba kuti kana tave nazvo
rimwe basa rechinhu ichocho pano ngatitsvakei nyowani
ruzivo ... kwaziso *****
Pindura kuna luci uye savi
Zvakanaka, zvaive zvisina basa kwandiri, kana kune imwe
Ivo vane rakawanda RINOKOSHA ruzivo zvakanaka 😀
kupenga sei, ini gaaaayyyyy !!!!
NDINOKUDAI NDINODA !! Ndinoda
Mhoro zvakanaka, chokwadi ndechekuti, ruzivo rwako rwanga rusina basa kwandiri ok ndine hurombo ichokwadi ok
go ahead ok sorry hahahahahahahahahahahahahahahaha
iko kuseka kwaunofanirwa
Mhoro!! Ndine matambudziko ekududzira rubatsiro izarq..Handigone kuishandisa kana ndisinganzwisise chero chinhu !! Ndinovimba unogona kundibatsira ndatenda !!!
Pindura kuna clau
ine ruzivo rwakanaka asi ini ndinofunga zvingave zvakanaka kuwedzera rumwe ruzivo
Ke cool ndizvo zvese asi zvingave zviri nani kana vakapa mienzaniso, hamuna kuzvitenda here imi vanhu ?????????????
Ndiri kutsvaga basa
Pindura kune ely
Pindura kuna cindy
Anofara mukomana akadaro
Mhoro. Unogona kundibatsira ndapota? Ndine mubvunzo mumuedzo wandisinganzwisise. Inotara here sarudzo dzakasiyana dzakabatanidzwa mumenu yemamiriro ekutanga menyu muWindows Vista uye mumwe nemumwe anoitei? Ndibatsireiwo…
Pindura kuna HappyBoy
Mhoro ini ndoda kuziva kuti mamiriro emamiriro ezvinhu akarongwa sei kuitira bvunzo yechikoro
Zvaive zvakanaka maita basa!
Mhoro ndinoda rubatsiro rwakakosha kwazvo kune rimwe basa uye kana uchikwanisa kundipindura nhasi zvirinani ...
Zvakanaka, vakandibvunza nezve mutsauko uripakati pemenu yezviratidziro yewindo refaira uye hwindo refaira, asi handikwanise kuona kuti ndechipi uye ndinofanirawo kuisa fanika, asi sezvo ini ndisingazive kuti ndeapi windows, Ndingadai ndisingazive nzira yekuvaziva nayo.Ndiudzei zvirinani kuti hwindo nderei ndinokutendai
Ndinokutendai chaizvo nekugadzira iyi mhando yeruzivo, iyo inotsanangurwa kwazvo, ndinokupai zana
rakakura sei garikisi rekutsanangura kwandiri
NDATENDA, NDINOSHANDIRA ZVAKAWANDA
FENKIU WAVE ZVAVE ZVAKAITWA BERDAD HAZVIITI IZVI NEKUTI IYI YAKAKONZERWA KUTONhorerwa
ndatenda nerubatsiro rwako :)
Pindura kuna andreiiitha
Olaa aive mukirasi uye akandibatsira kuzorora .. Ndatenda
Izvi zvakandishandira nekutenda kwakawanda izvi zvakaita kuti ndiwane giredhi rakanaka asi ini handina kukodzera nekuti ndakariedzera ied
Mhoro. Kune basa ravakandibvunza: 8. Nyora zvirimo zvemenu yemamiriro eWindows desktop.
Chero ani ANOZIVA KUTI ANOGONESA SEI MIRAYIRO YENYAYA YENYAYA MENU?
Mhoro unogona kundibatsira nemubvunzo uyu ...
Ko mamiriro ezvinyorwa (akakunda) akapatsanurwa sei? ...
Mhoroi, iwe unogona kundibatsira nemenyu yepop-up, ndapota?
Chinhu chakaipa sei chavakandipa 1 cheizvozvo
Pindura kuna carmelina
Chinhu chakanaka sei chavakandipa mashanu icho
dina muse akadaro
Mhoroi ndine dambudziko nemenu yemamiriro ezvinhu mushoko, pandinodzvanya kurudyi rinoratidzika asi rinonyangarika ... ndapota mumwe munhu angandibatsira
Pindura kuna dina musa
Boeing inodhonza silhouette yendege panguva yekuyedza kubhururuka
Google inofarira kutenga Snapchat ye $ 30.000 bhiriyoni